सेयर बजार: नेप्से परिसूचक घट्यो - Nepal’s First News Agency
काठमाडौं, असोज १८ गते । सोमबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक घटेको छ । अघिल्लो साता पनि एक दिन बाहेक सबै कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको थियो । सोमबार नेप्से परिसूचक ६.६८ प्रतिशतले घटेर २ हजार ५ सय ७० दशमलव ८१ अंकमा झरेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ यन्डेक्स पनि १.२८ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । कारोबार रकम ४ अर्ब पनि पुग्न सकेन । ४८ हजार २३६ वटा कारोबार हुँदा ७६ लाख ५३ हजार २२० कित्ता शेयर किनबेच भएका छन् । जसबाट कारोबार रकम ३ अर्ब ६२ करोड ७७ लाख ९९ हजार ९३५ रुपैयाँमा रोकिएको छ ।
काठमाडौं, असोज २६ गते । नेपालको चर्चित ब्राण्ड गोल्डस्टारका जुत्ताहरु अब अमेरिकी बजारमा पाइने भएको छ । गोल्डस्टार जुत्ताको निर्माता तथा उत्पादक–वितरक कम्पनि किरण सुज म्यानुफ्याक्चरर्सले संयुक्त राज्य अमेरिकामा...
डन्डीमा लागेको ३० प्रतिशत अन्त शुल्क हटाइदिन्छौं: अर्थमन्त्री (भिडियो सहित )
काठमाडौं, असोज २४ गते । बजेट कार्यान्वयनका विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी तथा व्यापारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । आईतवार अर्थमन्त्री शर्माले आयातित स्टील बिलेटमा अन्त शुल्क बढाएपछि दुई ध्रुवमा...
काठमाडौं, असोज २२ गते । बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ। कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केटको कार्यालयमा सो शेयर बाँडफाँट भएको...
यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
काठमाडौं, असोज २१ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा ३.९ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । यो वर्ष नेपालले भने ७...
सेयर बजार: नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढ्यो
काठमाडौं, असोज २० गते । बुधबार शेयर बजारमा सुधार देखिएको छ । साताको दुइ दिन लगातार घटेको नेप्से परिसूचक तेस्रो दिन दोहोरो अंकले बढेको थियो । चौथो दिन बुधबार...
काठमाडौं, असोज २० गते । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर आईपीओ निष्काशनमा ल्याएको छ। कम्पनीले ९० कराेड रुपैयाँ बराबरको ९० लाख कित्ता शेयर...
काठमाडौं, असोज १९ गते । मंगलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब ४२ अंकले बढेको छ । केहीदिन यता लगातार घटिरहेको नेप्से परिसूचक मंगलबार ४१ दशमलव ८४ अंकले बढेर...
नेप्से परिसूचक ५६ अंकले घट्यो
काठमाडौं, असोज १७ गते । साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब ५६ अंकले घटेको छ । नेप्से परिसूचक ५५ दशमलव ९३ अंकले घटेर २ हजार...
सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनको तयारीमा (भिडियो सहित )
काठमाडौं, असोज १७ गते । काठमाडौंको चोभारमा निर्माण गरिएको सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनको अन्तिम तयारी गरिएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणका...
न्यादी हाइड्रोपावरको आइपिओ आजदेखि बिक्री खुला
काठमाडौं, असोज १५ गते । न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित मूल्यमा रु २२ करोड ५० लाख...
सेयर बजारः नेप्से परिसूचक ३२.५१ अंकले घट्यो
काठमाडौं, असोज १४ गते । विहिवार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ३२ दशमलव ५१ अंकले घटेर २ हजार ६ सय ३३ दशमलव ४२ अंकमा झरेको छ ।उता ‘क’ वर्गको...
सेयर बजार: नेप्से परिसूचक ५० अंकले बढ्यो
काठमाडौं, असोज १३ गते । शेयर बजारमा बुधबार नेप्से परिसूचक ५० अंकले बढेको छ। यसदिन शेयर कारोबार मापन नेप्से ५०.५८ अंकले वृद्धि भएर २६६५.९३ विन्दुमा अडेको छ। कारोबारको...
कोकाकोलाले बोतलहरुमा ‘धन्यवाद’ शब्द लेबल गरी उपभोक्तामाझ पठाउने (भिडियो सहित )
काठमाडौं, असोज १३ गते । कोकाकोलाले यस वर्षको दसैँलाई केन्द्रीत गरी कोकका बोतलहरुमा ‘धन्यवाद’ शब्द लेबल गरी उपभोक्तामाझ पठाउने भएको छ । कोकाकोलाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस वर्षको...
सेयर बजार: नेप्से परिसूचक ७० अंकले घट्यो
काठमाडौं, असोज १२ गते । सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक मंगलबार करिब ७० अंकले घटेर २ हजार ६ सय १५.४० विन्दुमा ओर्लेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यो करिब...
काठमाडौं, असोज १२ गते । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु तीन सयले घटेको छ । छापावाल सुन सोमबार प्रतितोला रु ८९ हजारमा ३०० मा कारोबार भएको थियो...
काठमाडौं, असोज ११ गते । साताको दोस्रो दिन सोमबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार ७३ दशमलव ०५ अंकले घटेर २ हजार ६ सय ८५ दशमलव ४१ अंकमा झरेको...
मध्यभोटेकोशीको आईपीओ असोज २० गतेदेखि निष्कासन हुने
काठमाडौं, असोज १० गते । मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीले सर्बसाधारणलाई असोज २० गतेदेखि धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कसान (आईपीओ) बिक्री खुला गर्ने भएको छ। कम्पनीले सर्बसाधारणलाई प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित...
प्रकाशित: आइतबार, असोज १० २०७८
सेयर बजार: नेप्से परिसूचक ६१ अंकले घट्यो
काठमाडौं, असोज १० गते । साताको पहिलो दिन आइतबार बजार खुलेदेखि नै नेप्से घट्न थालेको थियो । कारोबार अवधिभर नेप्से उतारचढावपूर्ण रह्यो । अन्त्यमा सवा ६१ अंकले घटेपछि समग्र...
काठमाडौं, असोज ८ गते । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य रु. ६०० ले घटेकोे छ । छापावाल सुन बिहीबार रु. ८९ हजार ६०० मा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी...